दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरका यात्रुले अल्टिच्युड एअर सञ्चालकलाई फोन गरेर यसो भने, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरका यात्रुले अल्टिच्युड एअर सञ्चालकलाई फोन गरेर यसो भने, के छ अवस्था ?
सम्पर्कविहीन भएको हेलिकोप्टरका एक यात्रुले अल्टिच्युड एअरका सञ्चालक सीताराम सापकोटालाई सम्पर्क गरेर आफू सकुशल रहेको जानकारी दिएका छन्। सापकोटाले एक यात्रु आफंनो सम्पर्कमा आए पनि अन्यको अवस्था के छ भन्ने बारेमा केहि जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्।
‘म जंगलको बीचमा अलपत्र छु, मलाई ठाउँ थाहा छैन, उद्दार गर्न आउनू’, ती यात्रुले आफूलाई भनेको एअरका सञ्चालक सापकोटाले जानकारी दिए। उनले फोन गर्ने यात्रु को हुन् भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए। पछि फोन गर्ने यात्रु पनि सम्पर्कविहीन छन्। दुईवटा हेलिकोप्टरले अहिले सम्पर्कविहीन भएको हेलिकोप्टरको खोजी गरिरहेका छन्।
गोरखाबाट काठमाडौं उडेको अल्टिच्युड एअरको हेलिकोप्टर सम्पर्कविहीन भएको छ। 9NALS कल साइन भएको उक्त हेलिकोप्टर शनिबार बिहान ८ बजेर ५ मिनेट जाँदा सम्पर्कविहीन भएको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीले जानकारी दिए।
काठमाडौंबाट २५ नटिकल दूरीमा आएपछि हेलिकोप्टर सम्पर्कविहीन भएको तिवारीले बताए। हेलिकोप्टर धादिङको खनियावास गाउँपालिका माथिको आकाशमा आाएपछि हराएको हो। हेलिकोप्टर क्याप्टेन निश्चल केसीले उडाइरहेका थिए।
हिरोमी कामात्सु (पासपोर्ट नम्बरः TK713612068 YEAR)